FAQ: B1G1 promotion – SUNNY eSTORE
FAQ: B1G1 promotion
SUNNY eSTORE ၏ B1G1 အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အကြောင်း
About SUNNY eSTORE B1G1 promotion
တစ်ခုဝယ် တစ်ခုအလကားရ (B1G1) အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
သတ်မှတ်ထားသည့်ပစ္စည်း(များ)ထဲမှ တစ်ခုကို သင် ဝယ်ယူလျှင် သင့်အနေနှင့် ထိုပစ္စည်းနှင့် အမျိုး အစားတူတစ်ခုကို အလကားရရှိမည်ဖြစ်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
B1G1 အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်သည် သတ်မှတ်ထားသည့်ပစ္စည်းများအတွက်သာ အကျုံးဝင် သည်။
What is Buy One Get One Free (B1G1) promotion?
It isapromotion where if you buy one unit of select product(s), you will get one unit of the same product for free.
B1G1 promotion is valid only for specified products.
B1G1 အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် ဘယ်အချိန်မှာစပြီး၊ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။
B1G1 အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်သည် ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင် စမှာဖြစ်ပြီး၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်တွင် ပြီးဆုံးမည်၊ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းလက်ကျန်ရှိသေးသည့်အထိ ဖြစ်သည်။
When does B1G1 promotion start and how long is it?
B1G1 promotion starts on June 13 and ends on June 21 or while stocks last.
ဤအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွင် ဘယ်သူတွေ ပါဝင်နိုင်သလဲ။
အခြားဖော်ပြထားချက်များ မရှိပါက SUNNY eSTORE ၏ ဝယ်ယူသူအားလုံးသည် B1G1 အရောင်း မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
All SUNNY eSTORE’s customers are eligible to participate in B1G1 promotion, unless otherwise specified.
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ဖြစ်သည့် COM.MM ပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ B1G1 အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်စာမျက်နှာမှ ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်မှာယူခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ နံနက် ၇ နာရီမှာ ည ၁၀ နာရီအတွင်း ၀၉ ၈၉၁ ၇၄၉၄၈၉ ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ customer service hotline ထံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ည ၁၀ နာရီမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook messenger chat ပေါ်တွင် ရေးသားပြီးမှာယူနိုင်ပါသည်။
You can participate by ordering the deals directly from our B1G1 promotions page on our website at SUNNY.COM.MM
Alternatively, you can also call our customer service hotline at 09 891 749489between 7AM – 10PM during promotion period to place your order, or simply drop usanote on our Facebook messenger chat before 10PM.
ဘယ်ပေးချေမှုနည်းလမ်းတွေကို ကျွန်ုပ် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
‌သင်၏ဝယ်ယူမှုကို နည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် - (၁) KBZPay ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ကုန်သည်ငွေစာရင်း (စာရင်းနံပါတ် - ၇၀၀၀၁၉၀၁) ထံ ငွေလွှဲပြီး ပေးချေနိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် (၂) သင့်တံခါးဝသို့ ပစ္စည်းများ ရောက်သည့်အခါတွင် Cash on Delivery အား အသုံးပြုရုံဖြင့် ပေးချေ နိုင်ပါသည်။
ဤအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်မှာ ကျွန်ုပ် အမှာဘယ်နှစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သလဲ။
အခြားဖော်ပြချက်များ မရှိပါက အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကာလအတွင်း သင် မှာယူနိုင်သည့် အရေအတွက်မှာ ပစ္စည်း stock လက်ကျန်ရှိနေသည့်အထိ မည်သည့်အကန့်အသတ်မှ မရှိပါ။
လိမ်လည်မှု၊ မသမာမှု သို့မဟုတ် အခြားအလွဲသုံးစားပြုလုပ်သည့်ပုံစံတစ်ခုခုဖြစ်သည်ဟု သံသယ ရှိခဲ့ပါက SUNNY eSTORE အနေနှင့် မည်သည့်အမှာကိုမဆို ဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်မပြုခြင်း ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
How many orders can I make during this promotion?
There is no limit to the number of orders you make during the promotion as long as products are in stock, unless otherwise specified.
SUNNY eSTORE reserves the right to cancel or disallow any orders in case of suspected fraud, mischief, or any other form of misuse.
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ပစ္စည်းပို့သည့်မူဝါဒမှာ SUNNY eSTORE ၏ အထွေထွေပစ္စည်း ပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
The delivery policy for promotions is consistent with SUNNY eSTORE’s general delivery policies.
ကျွန်ုပ်၏အမှာကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းပြန်လဲခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပြန်အမ်းယူခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဤအထူးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ပစ္စည်းတွင် မူလ/ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက် များရှိသည့်အခါမှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပစ္စည်း(များ) ပို့ပြီးသည့်အခါတွင် အမှာများအား ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။
ပစ္စည်းတွင် မူလ/ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များရှိပါက ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီးသည့်အချိန်မှ ၃ ရက်အတွင်း SUNNY eSTORE Customer Service Team ထံ ကျေးဇူးပြု၍ အကြောင်းကြားပါ။ မည် သည့်ပစ္စည်းပြန်လဲမှုမဆိုအား ၁၄ ရက်အတွင်း အပြီးပြုလုပ်သွားရမည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကုန်သည်များ၏ ပစ္စည်းပြန်လဲခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အချို့သောဖြစ်စဉ်များတွင် ကွာခြားမှုများရှိနိုင်သည်။
B1G1 အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ငွေပြန်အမ်းယူခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ။
For special promotion, we do not accept cancellations of orders once we have delivered the product(s), except in the case of original / manufacturing defects.
Refunds are not allowed for B1G1 promotion.
အခြားအကျုံးဝင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ရှိပါသလား။
Are there any other terms that apply?